ကြည့်ရှု သူတိုင်း ကြွေသွား စေမယ့် အမိုက်စား အကလေး နဲ့ လျှို့ဝှက် အလှလေးတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ ရွှေမဘုံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ကြည့်ရှု သူတိုင်း ကြွေသွား စေမယ့် အမိုက်စား အကလေး နဲ့ လျှို့ဝှက် အလှလေးတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ ရွှေမဘုံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ကြည့်ရှု သူတိုင်း ကြွေသွား စေမယ့် အမိုက်စား အကလေး နဲ့ လျှို့ဝှက် အလှလေးတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ ရွှေမဘုံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
မြင် သူတိုင်း ငေးလောက် တဲ့ ချစ်စရာ ကောင်း တဲ့ မျက်နှာ လေး နဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာ ကိုယ်လေး ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် ရွှေမဘုံကို သိကြ မယ် ထင်ပါ တယ် နော် … ။ ။ မော်ဒယ်လ် လောက ကို ဝင်ရောက် တာ မကြာသေး ပေမယ့် ပရိသတ် အများ အပြားရဲ့ တစ်ခဲ နက် အားပေး မှုကို ရယူ ပိုင်ဆိုင် ထားတာ ဖြစ် ပါ တယ် … ယောကျာ်းလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှု အများဆုံး ရရှိထား တဲ့ သူမ က တော့ ဆိုရှယ် media လောကမှာ နာမည် တစ်လုံး နဲ့ ရပ် တည် နေသူ တစ် ယောက်လည်း ဖြစ် ပါ တယ် … .
သူမ ရဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းပြီး ဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက်စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့အား ပြင်းပြင်း ဆွဲ ဆောင် နိုင်သူလေး ဖြစ်တာ ကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ် စာမျက် နှာ မှာ ရေပန်း စား လူကြိုက် များကာ ပုရိသ တွေ ဝန်း ရံ နေကြ တာလည်း ဖြစ်ပါ တယ် … . သူမရဲ့ အမိုက် စား ပုံရိပ် တွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ် တွင် အများ ဆုံး တင်လေ့ ရှိတာ တွေ့ ရပါ တယ် … .
အခု မှာ တော့ ခပ်မိုက် မိုက် ပုံစံလေး နဲ့ ရိုက်ထား တဲ့ ဗီဒီယို လေး ကို ပရိသတ် တွေ အတွက် တင်ပေး လာတာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … . ရွှေမဘုံ တစ် ယောက် ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ နဲ့ လန်းလွန်း နေတာလည်း ဖြစ် ပါ တယ် … ။ သူမ က တော့ လတ် တလော လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ မှာ အမျိုးသား တွေရဲ့ ဝန်းရံ ခြင်းကို ခံနေ ရတာဖြစ် ပြီး လူကြိုက် များ လာတဲ့ မော်ဒယ်လ် အမိုက်စား လေး ဖြစ် ပါ တယ် … . ။ ပရိသတ် တွေ တွက် ရွှေမဘုံ ရဲ့ အလန် စား ဗီဒီယို လေး ကို မျှ ဝေပေး လိုက် ပါ တယ် နော် … .
ျမင္ သူတိုင္း ေငးေလာက္ တဲ့ ခ်စ္စရာ ေကာင္း တဲ့ မ်က္ႏွာ ေလး နဲ႔ အမိုက္ စား ခႏၶာ ကိုယ္ေလး ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ ေ႐ႊမဘုံကို သိၾက မယ္ ထင္ပါ တယ္ ေနာ္ … ။ ။ ေမာ္ဒယ္လ္ ေလာက ကို ဝင္ေရာက္ တာ မၾကာေသး ေပမယ့္ ပရိသတ္ အမ်ား အျပားရဲ႕ တစ္ခဲ နက္ အားေပး မႈကို ရယူ ပိုင္ဆိုင္ ထားတာ ျဖစ္ ပါ တယ္ … ေယာက်ာ္းေလး ပရိသတ္ ေတြရဲ႕ ဝန္းရံ အားေပးမႈ အမ်ားဆုံး ရရွိထား တဲ့ သူမ က ေတာ့ ဆိုရွယ္ media ေလာကမွာ နာမည္ တစ္လုံး နဲ႔ ရပ္ တည္ ေနသူ တစ္ ေယာက္လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
သူမ ရဲ႕ ခ်စ္စရာ ေကာင္းၿပီး ဆက္ဆီ က်က် အမိုက္စား ပုံေတြ နဲ႔ ညိဳ႕အား ျပင္းျပင္း ဆြဲ ေဆာင္ ႏိုင္သူေလး ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ လက္ရွိ ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ ႏွာ မွာ ေရပန္း စား လူႀကိဳက္ မ်ားကာ ပုရိသ ေတြ ဝန္း ရံ ေနၾက တာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ … . သူမရဲ႕ အမိုက္ စား ပုံရိပ္ ေတြ ကို လူမႈ ကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ ေပၚ တြင္ အမ်ား ဆုံး တင္ေလ့ ရွိတာ ေတြ႕ ရပါ တယ္ … .
အခု မွာ ေတာ့ ခပ္မိုက္ မိုက္ ပုံစံေလး နဲ႔ ႐ိုက္ထား တဲ့ ဗီဒီယို ေလး ကို ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ တင္ေပး လာတာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ … . ေ႐ႊမဘုံ တစ္ ေယာက္ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိရွိ နဲ႔ လန္းလြန္း ေနတာလည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ … ။ သူမ က ေတာ့ လတ္ တေလာ လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ မွာ အမ်ိဳးသား ေတြရဲ႕ ဝန္းရံ ျခင္းကို ခံေန ရတာျဖစ္ ၿပီး လူႀကိဳက္ မ်ား လာတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ အမိုက္စား ေလး ျဖစ္ ပါ တယ္ … . ။ ပရိသတ္ ေတြ တြက္ ေ႐ႊမဘုံ ရဲ႕ အလန္ စား ဗီဒီယို ေလး ကို မွ် ေဝေပး လိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post နှစ်ခါ ပြန်ကြည့် ချင်လောက်အောင် ဖမ်းစားထား တဲ့ မြစမ်းသီတာ ရဲ့ အလန်း စား ပုံရိပ်များ
Next post ကြည့်ရှု သူများနေ တဲ့ ဦးတွေ နဲ့ TIK TOK ဆော့ထား တဲ့ ခေးဆက်သွင် ရဲ့ ဗီဒီယို